Strategy First - Upcoming Classes - Level5HND in Business
Pearson BTEC Level 4
NCC Level4 Diploma in Business တွင် (၆) ဘာသာအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
အတွက် First Semester တွင်
1. Human Resources in Business
3. Information Systems and Organizations
Click here to call us now:+959450177771
OBU Pathway Programme – Second Year
၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလတွင် အတန်းစမည်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်မယ့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများအတွေ့အကြုံများစွာ ရရှိအောင် ပြင်ဆင်ပေးမည့် သင်တန်း Level4Diploma အောင်မြင်တဲ့အခါယူကေ တတ္ကသိုလ်များရဲ့ ဒုတိယနှစ်မှ စတင်တက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် ဆက်လက်လေ့လာ လိုပါက Strategy First Institute တွင် ဒုတိယနှစ် နဲ့ ညီမျှတဲ့ Level5ကို ဆက်လက် သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Level5ပြီးပါက နောက်ဆုံးနှစ်တစ်နှစ်တည်းကိုသာ UK နဲ့ Australia နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးဘွဲ့ကို ရယူနိုင်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် နောက်ဆုံးနှစ်အထိတက်ရောက်ပြီး ယူကေ စီးပွားရေးဘွဲ့ ရယူချင်သူများအတွက်
1.Research Project (Pearson-set Assessment)
3.Statistics For Management
5.Human Resources – Values and Contribution to Organizational Success
7.Planning for Growth
သင်တန်းကြေးများကို AYA Bank ၏ Credit Card ဖြင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ AYA Bank ၏ Credit Card ဖြင့် ပေးသွင်းပါက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း လျှော့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းကြေးများကို AYA Bank ၏ Education loan ဖြင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ AYA Bank ၏ Education loan ဖြင့် ပေးသွင်းပါက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လည်း လျှော့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
AYA Education Loan ဖြင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းပါက ကနဦးအနေဖြင့် ၅၃၆,၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးသွင်းရ မည်ဖြစ်ပြီး တစ်လလျှင် ၁၉၂,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ၁၂ လတိတိ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဂုဏ်ထူးအလိုက် ၇၅% အထိချီးမြှင့်မည့် Scholarship အစီအစဉ်
ပထမနှစ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲနှင့် IGCSE စာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးရသည့်ဘာသာရပ် အရေအတွက်အလိုက် Scholarship ချီးမြှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲနှင့် IGCSE စာမေးပွဲမှာဘာသာစုံဂုဏ်ထူးထွက်ထားတဲ့သူတွေအတွက် ဆို ကျပ်သိန်း (၂၀) အထိ Scholarship Discount ခံစားခွင့်တွေရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင် UK အသိအမှတ်ပြု ဘွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကောင်းဖို့လိုတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ အမှတ် ၆၀ နှင့် အထက် ဆို ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် Scholarship Discount နဲ့ ဂုဏ်ထူး ၁ ဘာသာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဂုဏ်ထူး ၂ ဘာသာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဂုဏ်ထူး ၃ ဘာသာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဂုဏ်ထူး ၄ ဘာသာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဂုဏ်ထူး ၅ ဘာသာ - ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
ဂုဏ်ထူး ၆ ဘာသာ - ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် စတဲ့ scholarship discount တွေလဲပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Cash down သွင်းတဲ့သူတွေအတွက် ၁၀% Discount လျှော့ပေးဦးမှာပါ။ •သင်တန်းကြေးကရော ဘယ်လောက်လဲ?
ပထမနှစ်အတွက် သင်တန်းကြေးက- ၃၅ သိန်း ၇ သောင်း ၅ ထောင်
ဒုတိယနှစ်အတွက် သင်တန်းကြေး:က- ၃၈ သိန်း ၇ သောင်း ၅ ထောင် |စာမေးပွဲကြေး - ပေါင် ၃၈၀ ပါ။
ဒုတိယနှစ်အတွက် သင်တန်းကြေး Scholarship ကို တော့ပထမနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သော အမှတ်များ နှင့် ကျောင်းတွင်းCertificate များရရှိမှုအပေါ် အခြေခံပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနှစ်သင်တန်းကြေး ကတော့ ၁၀၅သိန်း ပါ။ နောက်ဆုံးနှစ်အတွက် သင်တန်းကြေးScholarship ကို တော့ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တွင်ရရှိခဲ့သော အမှတ်များ နှင့် ကျောင်းတွင်း Certificateများ ရရှိမှုအပေါ် အခြေခံပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။